एप्पलले पर्दा पातलो र अधिक प्रभावशाली बनाउने योजना बनायो | आईफोन समाचार
एप्पलले पातलो र अधिक दक्ष प्रदर्शनहरू बनाउन गुप्त प्लान्ट खोल्यो
धेरै विश्लेषकहरूका अनुसार एप्पलले प्रयोग गर्ने छ OLED प्रदर्शन मध्यम आईटममा भविष्यमा उनीहरूको आईफोनमा। यदि अफवाहहरू र विश्लेषक रिपोर्टहरू पर्याप्त थिएनन्, अब यो ज्ञात भइरहेको छ कि एप्पलले एक खोल्यो उत्पादन प्रयोगशाला उत्तरी ताइवानमा जहाँ उनीहरू नयाँ प्रविधि विकास गर्दैछन्। ब्लोमेरांगका अनुसार यस प्रयोगशालामा कम्तिमा 50० ईन्जिनियर र अन्य कामदारहरू हुने छन् उपकरणहरूका लागि प्रदर्शनती मध्ये जो, यो कसरी अन्यथा हुन सक्छ, आईफोन, आईप्याड र आईपड।
एप्पलले यो प्रयोगशालामा यस बर्ष काम गर्न थालेको छ र यसको उद्देश्य स्क्रिनहरू सिर्जना गर्नु हो पातलो, हल्का, उज्यालो र अधिक कुशल, जसले उपकरणहरूको स्वायत्तता सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। ब्लूमेरंगले सम्भावना पनि विचार गरिरहेछन् कि कपर्टिनोबाट आएका व्यक्तिहरूले ओएलईडी स्क्रिनहरूमा उनीहरूको उपकरणहरूको स्क्रीनको प्रकार परिवर्तन गर्दछन् जुन हामीले नोभेम्बर / डिसेम्बरको अन्त्यमा नेटवर्कको वरिपरि घुम्ने धेरै अफवाहहरूमा पढिसक्यौं।
यदि एप्पलले नया प्रदर्शन टेक्नोलोजीको विकासमा सिधा काम गर्दछ भने, तिनीहरू सामसु,, एलजी र शार्प जस्ता अन्य कम्पनीहरूमा उनीहरूको निर्भरता कम गर्दछ। यो प्रयोगशालामा गरिएको अध्ययनबाट प्राप्त नतिजाहरूको साथ टिम कुक र कम्पनीको दिमागमा के छ त्यो हेर्न बाँकी छ। यो सम्भव छ कि उनीहरू प्रोसेसरसँगै गर्छन्, एप्पलले उनीहरूलाई बनाउने एउटा तरिका डिजाइन गर्दछ ताकि उनीहरूले यसलाई फक्सकन जस्ता कम्पनीहरूमा निर्माण गर्न सक्नेछन्। उनीहरूको अधिकांश अध्ययन क्यापरटिनो वा क्यालिफोर्नियामा गरिन्छ, तर एप्पलको आफ्नै फ्याक्ट्री छैन, बरु यसको उपकरणहरू निर्माण गर्न श्रम आउटसोर्स गर्दछ।
अर्कोतर्फ, कपर्टिनोमा ती पनि धेरै ए.यू. ऑप्ट्रोनिक्स कर्मचारीहरु र Qualcomm परिसरमा काम गर्न, क्वालकमको स्वामित्वमा रहेको सुविधा। ब्लोमेरांगबाट प्राप्त जानकारीका अनुसार एप्पलले गत अप्रिलमा यस ल्याबमा काम गर्न शुरू गर्यो।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » एप्पलले पातलो र अधिक दक्ष प्रदर्शनहरू बनाउन गुप्त प्लान्ट खोल्यो
ठिक छ, यदि उनीहरूले यो पहिले नै भन्यो भने, यो अब गोप्य छैन! LOL
तपाईको आईफोनका लागि उत्तम केसहरू
यदि तपाईं आफ्नो फोटोहरू सिंक गर्न जारी राख्न चाहानुहुन्छ भने फेसबुकले तपाईंलाई "पलहरू" डाउनलोड गर्न बाध्य पार्दछ